Zvekucheche-Biography- Kuzvipira Kwedu kune Vafesi Pasi Pose
Nhoroondo sekuiziva kwayo, izere nenyaya dzisingataurike & zviitiko zvakakosha muhupenyu hwevanhu. Zvatinoita ndezvokubatsira iwe kutaura nyaya. ChildhoodBiography inonzwisisa kukosha kwezviitiko zvisingaverengeki kana zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi muhupenyu hwevanhu vanozivikanwa uye unoedza nesimba kuona kuti havapfuure pazivo.
CB inobata zviitiko zvishoma-zvinozivikanwa muhupenyu hwevanhu vanozivikanwa kubva paudiki hwavo kusvika nhasi. Credits: CB.
CB inozadzisa izvi nekubatanidza zviitiko zvidiki-zvinozivikanwa pasi pemisoro inofambira mberi pakunyora biografikesi semuenzaniso pazasi.
mangwanani upenyu uye mhuri kumashure
Zviitiko zvisina kujairika pasi pemisoro yeYakatanga Upenyu uye Yemhuri Yepashure zvakakosha. Kunze kwezvakakurumbira zvinozivikanwa zvezviitiko zvehupenyu hwepakutanga uye mamiriro emhuri, iwo musoro wenyaya unoratidza zvisinganyatsozivikanwe chokwadi chinoita kuti vateereri vedu vafarire rwendo rwakareba.
Tora semuenzaniso nyaya yeWWE superstar John Cena uyo akazvarwa aine tambo yembilical yakaputirwa muhuro. Kuberekwa kwaJohn kwaive, muchokwadi, imwe yemamiriro ezvinhu anotyisa aigona kutungamira kumatambudziko ekuberekwa. Nekudaro, akapona uye anorarama kuti agovane yake "haamboregi mantra" kune nyika.
Havasi vazhinji vanoziva izvozvo John Cena akazvarwa aine umbilical tambo yakange yakaputirwa pamutsipa wake. Credits: TheAsianParents uye CB.
dzidzo uye basa rekuita Vaka
Pasi pemisoro yenyaya yeDzidzo uye Yekuvaka Basa, CB inoita kuti ive pfungwa yebasa kuti iende kupfuura ichipa ruzivo pamusoro pe profiles dzidzo yepashure uye zviitiko zvakavatungamira kuti vatsike iyo chaiyo nzira yebasa.
Ndichiri kutsvagura nekunyora nezve maprofiles panguva ino yehupenyu hwavo, isu tinocheka zvakadzama kuti titaure zvisingazivikanwe chokwadi senge pane zvakaitika kumiriri weAmerica Jeff Bezos iyo yekutanga bhizinesi yake yekuedza yekutanga musasa wezhizha panguva yake yechikoro chepamusoro mazuva.
Unoziva here kuti Jeff Bezos aive mudzidzi wepachikoro chepamusoro paakatanga kosi inotarisira mari yezhizha inonzi "Dream Institute". Chikwereti: FamousBio.
Early basa rekuita upenyu
Kuti tibatsire vateereri vedu kubata zvishoma zvisingazivikanwe muKutanga Basa rehupenyu, zviitiko zvinopihwa sekufambisira mberi kwebasa ratakatangwa kana shanduko yakakosha munzira yebasa.
Mhosva yakanaka semuenzaniso ndeyeAmerican tech bilionea Larry Ellison uyo asina kufanana nevazhinji vekugadzira tech haana kutanga kana kupedzisa chero yakakosha tech projekiti mukutenderera kwake kwese kwakadzidziswa Pane kudaro, akatanga akazvidzidziswa tech geek apedza chikoro.
Larry Ellison akazova tech geek mushure mekusiya chikoro. Chikwereti: TheIndependent.
mugwagwa To Mukurumbira nyaya
Arguingly imwe yemisoro ine plethora yezvinhu zvisingazivikanwe, Road to Fame misoro inoratidza zvisinganyatso kuzivikanwa chokwadi mune hunhu izvo zvinoita kuti vateereri vedu vazivise kana hukama kuti sei zvipingamupinyi zvakava kuita kuti nzvimbo dzishanduke.
Muenzaniso ndewe Drake iro rine dhizaina rakanzi "Nditendei Gare gare" rakanga riine zvikanganiso zvaipindirana nebasa rekukurumidza. Achigadzirisa zvakaipa, akapa zita rake rwiyo rwekuti "Chenjera" uye aramba achitarisira kuripo kubvira ipapo.
Kuchinja kwenyaya yemumhanzi yaDrake kwakatanga nekusagutsikana pamusoro pechimbi chimbi chakagadzirwa. Chikwereti: Genius.
simuka To Mukurumbira nyaya
Kumashure kwechiitiko chega chega chakabatsira mukurumbira wakawana mukurumbira chiitiko chakanyanyoitika chinowanzoitika kana kutaurwa zvishoma nezvacho. Sezvo iwe unotoziva iwe, CB hainyari kubva kuratidza izvi zviitiko kunyangwe mumisoro yemisoro Rise kune Mukurumbira Nyaya.
Naomi Osaka inyanzvi mutambi tennis uyo pane imwe nguva yebasa rake aisakwanisa kufambira mberi. Achitaura nezvenyaya iyi, akaripira kara nyowani aimbova Serena Williams kurova mumwe, vamwe, sezvavanotaura, inhoroondo.
Naome Osaka akarekodha kubudirira mukukwakuka uye miganho mushure mekuhaya Serena Williams 'aimbo rova ​​mudiwa, Sascha Bajin (akafananidzirwa naye) semurairidzi wake mu2018. Chikwereti: USOpen.
ukama upenyu Chokwadi
Taura zvehukama Hupenyu Chokwadi misoro, ivo vakasarudzika uye vakasarudzika vanotora nzira yekumberi mukupa Untold Chokwadi kana vachiburitsa nhoroondo yakazara ye profiles rudo hupenyu kusvika zuva zvinosanganisira chokwadi nezvekwavo.
Unoziva here? Media Mogul, Oprah Winfrey ichiri yekuroora panguva yekunyora. Padivi redhiri, American mutambi Angelina Jolie akaroora katatu. Mune mamiriro ekunze anonzwira tsitsi, weBritain wezvematongerwo enyika Theresa May haana mwana nemurume wake nekuda kwezvikonzero zvekurapa.
Theresa May uye murume wake haana mwana nekuda kwekurwara. Chikwereti: Mogzanews.
mhuri upenyu Chokwadi
Ita zvikanganiso, mune Hupenyu hweMhuri Chokwadi, misoro, isu tinoburitsa chokwadi chisingataurwe kana chakaderera kana tichipa ruzivo nezvenhengo dzemhuri yefaira uye hukama huripo pakati pavo.
Mtukudzi boxer, Floyd Mayweather ane mukoma-wehafu, Justin Jones uyo aive ari pane iro riri nani chikamu chemakore ake okuyaruka asina hanya nenyaya yekuti aiwirirana neyemubhokisi. Sezvineiwo, Justin akakura achidzidzira zvekuratidzira aive neshamwari uye vanoyemura izvo zvakamuita kuti azive kuti aive akafanana naMayweather. Akaenderera mberi nekuongororwa DNA uye parizvino achirarama senhengo yakasimbiswa yemhuri yaMayweather.
Floyd Mayweather akabatanidzwa nemunun'una wake mukoma Jonas (ari kuruboshwe kuruboshwe) apo wekupedzisira aive 16 makore. Chikwereti: CB.
Personal upenyu Chokwadi
Kutora tsvakiridzo yakanaka yeUpenyu Hwechokwadi Humwe haugone kubatsira asi cherechedza kuti chikamu chimwe nechimwe chemusoro chinosanganisira zvemukati zvemashoko pamusoro pehupenyu hwepamoyo, zvekuseredza uye zvido zvezvinhu zvigadzirwa zveNye chokwadi.
Havasi Vazhinji vanoziva izvozvo Elon musk haana mufungo, anozvifambisa uye anozvikurudzira kuti azadzise zvinangwa zvake. Unhu hwambotaurwa hunomuita kuti ashande kwenguva refu zvisina mwero nemaakaundi ekuwedzera ehupenyu hwake hudiki hunozivikanwa husina mwero.
Elon Musk anoshanda kwete mashoma kupfuura maawa e80 pavhiki. Chikwereti: CNBC.
Haisi musoro unosiyiwa kunze, Maitiro ehupenyu zvakare ane kana zvinhu zveS Untold Chokwadi apo ruzivo pamusoro pe profiles yakakosha, zvinhu uye maitiro ekushandisa zvinounzwa.
Hapana mbiri inoita muenzaniso wakakwana senge mabhiriyoni eAmerica, Warren retafura Iye anogara pakati pevapfumi pasi rose asi achirarama hupenyu hunomuratidzira seanogarika. Iwe unoziva here kuti anogara mune $ 31,500 imba panguva yekunyora uye akawana Cadillac XTS yekushandisa mu2014.
Warren Buffett akawana $ 45,000 Cadillac XTS yekushandisa pachako mu2014. Chikwereti: CNBC.
Chekupedzisira asi zvechokwadi kwete chishoma ndeye Untold Chokwadi. Musoro wega chipupuriro chekuedza kwakagadzirirwa kuve nechokwadi chekuti vateereri vedu vanowana mufananidzo uzere weprofessha kuburikidza nezvidiki-zvinozivikanwa chokwadi izvo zvisingakwanise kuiswa zvakanaka mune chero ipi yakadudzwa 9 misoro.
Rondedzero ine mapoinzi ehuputi pasi pebato "Unoziva here"?, izvo chokwadi zvinonakidza zvakananga kune izvo zvinoita semuenzaniso pazasi.
Mark Zuckerberg ine ruvara rutsvuku rweganda bvudzi, kukura kunoenderana nebhuruu rwe Facebook nekuti Mako anoona bhuruu zvakajeka kupfuura chero rumwe ruvara.
Mufananidzo unoratidza zvinoitwa nemaziso aMark Zuckerberg ane ruvara rutsvuku uye girini. Chikwereti: CB.
Munhu anozivikanwa basketball player LeBron James anopfura neruoko rwake rwerudyi asi achidya uye anonyora neruboshwe.
LeBron James uye mashandisiro akasiyana emaoko ake. Chikwereti: CB.
Muimbi anozivikanwa Keith Urban anotenda vateveri vake zvakanyanya kuti kazhinji kazhinji achasarudza mashoma kuti auye pachikuva uye oimba achitungamira kana kuridza gitare rinotungamira.
Keith Urban anokoka vateveri pachikuva panguva yekuita kwake uye anovasimbisa nemitobvu inotungamira. Chikwereti: CBC.
Fungidzira zvese izvi zvinobata chokwadi zvakasanganiswa nenyaya dzehucheche dzemaprofiles uye dzakazara mune yakazara vhidhiyo. Kufungidzira kwako kwakafanana neyangu - kunotyisa !. Ndokumbira ushanyire uye NZIRAI kwatiri YouTube mugero yevhidhiyo pfupiso yenyaya dzevacheche nyaya uye untold biography chokwadi.